र मेक्सिको महिला
प्रकारको, दयालु स्वभाविक र प्रकार छ जसले महिला, उनको जीवनको धेरै धेरै सँगै र एक धेरै संग साझेदारी गर्न सही मानिस । म हाँस्नुहुन्थ्यो गर्न प्रेम र सामान्यतया देख्न हास्यास्पद पक्ष को जीवन र । म हुँ एक रोमान्टिक. म जस्तै संगीत, नृत्य, राम्रो सिनेमा बिना र विशेष म जस्तै पढ्न र यात्रा धेरै छ । म सकारात्मक छु, आनन्दित र पूर्ण जीवन हो । म भनेपछि हुरुक्कै नृत्य गर्न, पढ्न, फिलिमहरु हेरिरहेका कफी पिउन (कालो), एक राम्रो हांसो संग मेरो मित्र र जा संगीत छ । म साँच्चै जस्तै शिविर र पैदल यात्रा तर म, स्विडिश नागरिक, मा धाराप्रवाह अंग्रेजी र स्विडिश प्लस केही स्पेनी, कलेज स्नातक, राम्रो-यात्रा मा गाडेको, फिलिपिन्स तर मुख्य बसोबास मेक्सिको. मन पर्ने खाना पकाउने, बगैचा छ । म छु एक सरल महिला, म छु लाग्छ स्मार्ट, म आनन्द दिने, राम्रो मलाई मेरो साथी । म विश्वास मा प्रेम पनि कहिलेकाहीं मेरो हृदय थियो, म एक असल मोइर् छु, प्रेम चलचित्रहरू (मुख्यतः विदेशी) एक राम्रो रेस्टुरेन्ट । मित्र, एक राम्रो भेला छ । म जस्तै घुडसवारी.
सबैभन्दा ठूलो साहसिक म लिन सक्छन्, छ जीवन बाँच्न मेरो सपना छ । प्रेम, सरल र जीवन । अनुकूल प्रेम गर्न नयाँ मान्छे भेट्न. रमाइलो बाहिरी गतिविधिहरु, यात्रा, संगीत । इमानदारिता धेरै महत्त्वपूर्ण छ । म हुँ एक सकारात्मक महिला । प्रेम आउटडोर, यात्रा, कुकिङ, सिक्ने नयाँ कुरा, हरेक दिन आनन्द मा काम सानो परियोजनाहरू, रही मेरो हात फोहोर, देख राम्रो र आनन्दित जीवन पूर्ण गर्न जब । म छु धेरै अनुकूल छ र म जान्न चाहनुहुन्छ व्यक्ति साझेदारी गर्न मेरो जीवन र विचार उमेर, पेशा, पैसा वा शारीरिक उपस्थिति ।, आदरणीय, इमानदार, संवेदनशील, आध्यात्मिक । बुद्धिमान.
संगीत आवश्यक, हाँस्न, नृत्य, मदत
हेरविचार लागि वातावरण जनावर बनाउने, एक राम्रो संसारमा । परिवार र साथीहरू महत्त्वपूर्ण छ ।. म एउटा इमानदार, परिश्रमी, मायालु, प्रसन्न, म हेर्न को लागि एक र स्थिर सम्बन्ध छ, म जस्तै म एक पैदल लागि जाने, म जस्तै प्रकारको हुन र निःस्वार्थ. म जस्तै हेर्न राम्रो पक्ष जीवनको प्रेम हास्य को राम्रो अर्थमा छ । एक सेवानिवृत्त वकिल काम भनेर लामो समय को लागि मेक्सिकन सरकार मा व्यापार र रोजगार क्षेत्र पछि काम भाग हो । म एक मेक्सिकन केटी, तीस-एक वर्ष पुरानो छ । म प्रेम संग समय खर्च मेरो प्रिय व्यक्तिहरूलाई र नयाँ मान्छे भेट्न. म आनन्द सिक्ने, मात्र विद्यालय प्रजालाई, म साँच्चै जस्तै सिक्न । धेरै साइटहरु दाबी मुक्त हुन तर तपाईं मारा संग आश्चर्य शुल्क तपाईं पछि सामेल । जडान एकल एक सय मुक्त मेक्सिको डेटिङ सेवा संग, सबै सुविधाहरू मुक्त र कुनै छक्कै पर्छन् ।, च्याट तत्काल सन्देश, ब्लग, र पोस्ट मा हाम्रो जंगली तर अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय र मेक्सिको डेटिङ फोरम बिना कुनै पनि कहिल्यै लागत.
कुनै लागत, कुनै क्रेडिट, कुनै कुपन, कुनै मजाक । मिलन नयाँ मेक्सिको एकल मित्र आज । तपाईं प्रयास गरेका छन्, सबै परम्परागत तरिकामा पाउन कसैले विशेष मेक्सिको मा. तपाईं को थकित मेक्सिको पट्टी क्लब, दृश्य, घर आउँदै खाली घर, एक्लो टेबल-लागि-एक मा ती रोमान्टिक मेक्सिको रेस्टुरेन्ट, विपत्तिजनक अन्धा मिति सेट अप गरेर आफ्नो मित्र, मेक्सिको स्थानीय एकल समूह, एकल घटनाहरू र बैठकहरू संग कुनै परिणाम छ ।
← पोर्चुगिज मा - सिक्न पोर्चुगिज स्काइप मा, मूल्य र गतिविधि रिपोर्ट
दस कदम गाइड संग सेक्स भएको मेक्सिकन - यो समस्या →